Waayo, markii dadka jecel in ay isticmaalaan VLC, hambalyaynayaa kuwa dooratay in aad noqoto guys VLC. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qaar ka mid ah arrimaha marka dadku ay isku dayayaan in ay isticmaalaan VLC. Waxaa ka mid ah kuwa, liiska hoos ku qoran isku dayo inuu ku qor dhibaatooyinkii kuwa ay u xalliyi. Halkan waxaa ku qoran liis ah:
1. VLC 2.2.0 iyo 2.1.2 hartay halka ay furan FLAC Files:
Dadka qaarkood ayaa cabasho ah nidaamka 2.2.0 cusub (oo 2.1.2) hartay markii furitaanka FLAC files in shaqeeyay nuquladii hore; halka files ku yaalaan ku wadid ah deegaanka
Xalka: Dadka, soo food saartay dhibaato ee kor ku xusan, ka dhalato ku meel gaarka ah Beddelista libflac_plugin.dll ka \_ plugins \_ codec arrintan mid hoos ku shaqayn kartaa: http://people.videolan.org/~jb/tmp/libflac_plugin.dll
Xalka kale, kaas oo noqon kara mid ka mid ah oo joogto ah:
Tag website-ka http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html , haddii aad isticmaalayso daaqadaha sida nidaamka qalliinka iyo riix badhanka heli VLC waxa aad u adeegta ilaa file 32 yara ee OR 64 file yara .
Riix uninstall aad heshay wax kasta version oo raaca kiisa kale ka hawlgala nidaamka link oo ka soo dejisan 64 yara version iyo rakib; waxaa la socday si ay u xaliyaan dhibaatooyinka VLC. Waxaa laga yaabaa inaad ku faraxsan tahay inaad ogaato in dhibaato loogu 2.2.0 VLC iyo 2.1.2 hartay halka ay furan FLAC Faylal ay la tir in version VLC 2.2.1.
2. VLC burburtay marka la isku dayayo in encode in FLAC:
Seenyada Tani waxay si gaar ah ayaa loo arkay in Ubuntu oo waa mid ka mid ah arrinta ugu caansan ee soo muuqday.
Xalka: Xalku waa dhab ahaantii ma loo baahan yahay in kiiskan. Dadka ay sheegtay in dhibaato ay dib ka ogaaday in ay VLC 'wizzard' waxa ay sheegtay in uu si dhab ah ma ku haboon in transcoding, cadaalo badan durdurka network qabsaday. Waxay markii dambe sheegay in ay la soo isticmaalaya qalab kala duwan in ay encode .ogg video si dhab ah uma dambe dhibayay awoodda VLC ee horseedeen
3. FLAC dib u dhac shig-shigid in VLC Player:
Arrinta kale, oo dadka wajihi karo halka isticmaalka Video LAN waa dib u dhac ku shig-shigid FLAC in VLC Player. Dadka kuwa, kuwaas oo ay la soo gudboonaatay dhibaato arrintan, xal ka waxaa hoos ku xusan:
Xalka: Open VLC, Riix Settings oo aad rabtid ama isticmaal Ctrl-S haddii aad leedahay waayo-aragnimo la kombiyuutarada shakhsi. Dooro Audio , markaas modules Output, Riix fursadaha sare, Select Win32 ruxruxaa soo baxay wax soo saarka loo kordhiyo, ka dibna badbaadin isbedelada. Waxaan rajeynayaa, aad uga takhalusi karaa dhibaatooyin oo dhan.
4. FLAC gefo in Rincewind:
Waxaa ka mid ah liiska dhibaatooyin marka aad isticmaalayso, VLC ka FLAC gefo in Rincewind waa kaliya mid ka mid kale. Dadka qaar ayaa ogaaday dhibaato this, si kastaba ha ahaatee arrintan waa ku meel gaar ah uu seegay ma aha mid joogto ah oo dhacaya 5 - 10 ilbiriqsi ama ugu badnaan 1 daqiiqo
Xalka: Sida arin ku meel gaar ah, aad u cusboonaynta kartaa software in nooca ugu dambeeya. Dhab ahaantii, waxa ay ahayd oo keliya cayayaanka ah in la xalliyo in nooca ugu dambeeya ee VLC. Waxaad dareemi kartaa farqiga u dhaxeeya marka aad ka soo dejisan version cusub ee VLC
5. No audio markii ciyaaro f
Tani waxaa ay dhib ku ah, dadka wararka. Shaqeeya, iyadoo ganaax ka shaqeeya maalin ka hor dad badan ayaa warbixinta ku sheegay in dhammaan VLC kadis joojiyay. Qaar ka mid Comments xusan sida "Maanta waxaan u baxay inuu ka ciyaaro file FLAC ah oo helay codka ku jirin innaba. The tags faylka ku jira iyo ciyaaryahanka u muuqata in ay faylka sida caadiga ah iyo tan iyo saacada uu aadayo "ciyaaro. Waxa ay sheegtay in in ay isticmaalaya daaqadaha iyo isku dayay uninstall ama dib, laakiin dhibaato ayaa weli same.s ah
Xalka: jeer ka badan ayaa, kaararka Sound uu xayiray ama barnaamij kale waxa uu u adeegsanayaa. Dhammaan waxa aad u baahan yahay waa in la bilaabi aad PC.
6. Ma awoodo in uu ciyaaro file qayb FLAC sida durdurrada:
Dhibaato la xiriira inuu u ciyaaro Qayb FLAC Faylal ay tahay oo keliya arrin kale oo ay soo sheegeen dadka isticmaala qaar ka mid ah
Xalka: users badan oo waxay noqon doontaa dareenka nasashada in ay ogaadaan in tirada ugu weyn ee dhibaatooyinkii laga fogaadaa karo si fudud lagu casriyeeyo software si ay u dambayn. The cayayaanka iyo khaladaad yar yar, kuwaas oo VLC ayaa wajahaya in qoraalkii ka weyn, waxaa la ciribtiray version cusub ee software-ka. Dhab ahaantii, softwares oo dhan waxay leeyihiin hab la mid ah maaraynta arrinta iyo wax qalad ah iyo cayayaanka uu uga takhalusi off ee version cusub.
7. Mandrake Linux dayn maayo sameeyo ciyaaryahan default VLC for files FLAC igu:
Dhib ayaa ku hayaan in ka user dabiiciga ah sida uu yahay oo kaliya arrin xaqiiqada ah version hore.
Xalka: Same sida xal hore, waxaad u baahan tahay in la gaarsiiyo Version VLC in ay 2.2.1 iyo sida. Dhib ama All tegi doonaa.
Waxaa jira dhowr arrimood oo, taas oo dadka isticmaala ku kulmaan si maalinle ah marka aad isticmaalayso VLC ah. Xitaa, haddii aad u jeeda qaar ka mid ah dhibaatooyin ka la files FLAC la VLC, VLC weli waa mid ka mid ah dhufto ee ugu fiican in la arko waxqabadka files FLAC. Dhibaatooyinkii kasta oo ay dhacdo, baxdo, waxaa had iyo jeer waa xal qaar ka mid ah iyo iyada oo loo marayo thread wax wanaagsan, dhibaatooyinka la suulin karin iyo waxaad heli kartaa waayo-aragnimo wanaagsan ee FLAC Files.
> Resource > VLC > FLAC Files Arrimaha la VLC iyo maaraynta